नियमितरुपमा १० कित्ताभन्दा कमको पनि कारोवारः धितोपत्रको क्लियरिङ बैंक थप्न नेप्सेलाई निर्देशन — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > नियमितरुपमा १० कित्ताभन्दा कमको पनि कारोवारः धितोपत्रको क्लियरिङ बैंक थप्न नेप्सेलाई निर्देशन
नियमितरुपमा १० कित्ताभन्दा कमको पनि कारोवारः धितोपत्रको क्लियरिङ बैंक थप्न नेप्सेलाई निर्देशन
काठमाडौ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) लाई क्लियरिङ बैंक थप्न पुनः निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि क्लियरिङ बैंक थप्नको लागि नेप्सेलाई बोर्डले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पुनः बोर्डले निर्देशन दिएको हो ।
धितोपत्र कारोवारको राफसाफ तथा फर्छ्यौट कार्यलाई छिटो छरितो गर्न बोर्डले नेप्सेलाई पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । बोर्डको निर्देशनलाई नेप्सेले आलटाल गर्दै आएपछि बोर्डले अर्को निर्देशन दिएको हो । बोर्डले नेप्सेलाई कम्तिमा पनि दुईवटा क्लीयरिङ बैंक थप्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि नेप्सेले भदौ १५ गतेसम्ममा क्लियरिङ बैंक थप्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । नेप्सेले मंसिर वित्न लाग्दा पनि क्लियरिङ बैंक थपेको छैन ।
त्यस्तै नेप्सेले धितोपत्र दलालको सेवासमेत गत भदौ १५ गते सम्ममा बिस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर ‘हालसम्म पनि सो व्यवस्था भएको छैन । धितोपत्र दलालको सेवा विस्तार गर्ने क्लियरिङ बैंक थप्ने जस्ता सम्बन्धमा शीघ्र सिफारिश गरी बोर्डमा पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै बोर्डले नियमित कारोवारमा १० कित्ताभन्दा कमको समेत कारोवार हुन सक्ने व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ । हाल १० कित्ता भन्दा माथिको मात्र कारोबार हुने गरेको छ । बोर्डले बजार सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गत २०७२ माघदेखि पूर्ण अभौतिकिकरण गरी पूर्णस्वचालित धितोपत्र कारोवार प्रणाली लागू गरिसकेको छ ।
२०७३ मंशिर २२ गते १९:४० मा प्रकाशित
लघुवित्तको सेयर किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? १० लाख कित्ता सेयर भयो नेप्सेमा सूचिकृत
उद्योगमा आगलागीः रु २० करोडबढिको क्षति !
५% बोनसपछि १००% हकप्रद पाउने भए लगानीकर्ताले बुक क्लोजको यो मिति पढ्नुहोस् !